Managing the sales cycle ﻿
အရောင်းစက်ဝန်း (Sale Cycle) ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
အရောင်းစက်ဝန်း (Sale Cycle) ဆိုတာက ဘာလဲ?
အရောင်းစက်ဝန်း (Sale Cycle) ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသူများ ၏ လက်ထဲကို ရောက်ရှိစေနိုင်ဖို့ ကူညီပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေဟာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသူတို့လက်ထဲကို ရောက်မလာခင် အထိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အစီအစဉ်အလိုက် ဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ် ဆောင်ချက်တွေဟာ အရောင်းစက်ဝန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်းစက်ဝန်း (Sale Cycle) တစ်ခုမှာ အောက်ပါအဆင့်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၁။ သုံးစွဲသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသူတွေ(Prospects) ကို သတ်မှတ်ခြင်း။
- အရောင်းစက်ဝန်း(Sale Cycle)ရဲ့ ပထမအဆင့်ကတော့ သုံးစွဲသူဖြစ်လာနိုင် ချေရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ စာရင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
- သင်ရရှိနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်များများစုဆောင်းပါ။ သုံးစွဲသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသူတွေကို ပုံဖော်ကြည့်ဖို့နဲ့ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းဖို့အတွက် သင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဈေးတွေ၊ဈေးဝယ်စင်တာတွေ နှင့် စားသောက်ဆိုင်တွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှု့ ခိုင်းပါ။
- အရောင်းနေရာ (ဆိုင်)တွေကို ဗျူဟာမြောက်နေရာတွေမှာ ထားခြင်းဟာလည်း သုံးစွဲသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်ပါတယ်။
- အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အချိန်အများစုကို ရုံးခန်းရဲ့ပြင်ပမှာဘဲ လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်းကုန်ဆုံးသင့်ပါတယ်။ သင်တတ်နိုင်သလောက် လူများများနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောပါ။
- သုံးစွဲသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိသူတွေကို ပိုပြီးသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ကြား မှာ မေးခွန်းတွေဖြန့်ဝေပေးပါ။
၂။ တွေ့ဆုံမှုတွေ ပြုလုပ်ပါ။
- နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ထုတ်ကုန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို လူတွေသိအောင် ပြုလုပ်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- လူတွေနဲ့ သိရှိရင်းနှီးနေဖို့ ကြိုးစားပါ။ သူတို့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး တွေ့ဆုံမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
- တွေ့ဆုံမှုတွေကို သင်အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အချိန်၊နေရာတွေမှာဘဲ ဦးစားပေးပြီး မစီစဉ်ပါနဲ့။
- သုံးစွဲသူရဲ့ နေရပ်လိပ်စာကို ရယူပါ။ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၎င်းရဲ့ အကျိုးအမြတ်(အားသာချက်)တွေအကြောင်းကို ကြိုတင်သိရှိထားဖို့အ တွက် သင့်တော်တဲ့အချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ မျှဝေပါ။
- ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်သူ(Marketer) တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ဝန် ဆောင်မှုတွေ အကြောင်းကို သုံးစွဲသူတွေကို ပြောပြဖို့အတွက် ကြိုတင်အကြောင်း မကြားဘဲ ဖုန်းဆက်(Cold Calls) တာတွေ အပေါ်မှာလည်း မှီခိုကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံမှုတစ်ခု စီစဉ်ဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာမျိုးလည်း မပြုလုပ်မိပါစေနဲ့။
- ဖုန်းကနေ တဆင့်ပြောနေချိန်မှာ သင့်မှာ အရောင်းစကား(Pitch) နဲ့ပတ်သက်ပြီး လည်း ဂရုပြုပါ။ စကားကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ပြောဆိုပါ။ မလိုအပ်တာတွေကို အကြာကြီးပြောနေမိတာမျိုး(လေကြောရှည်တာမျိုး) မဖြစ် ပါစေနဲ့။
၃။သင့်ရဲ့ သုံးစွဲသူကို ကောင်းကောင်းသိအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။
- သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ သုံးစွဲသူ (ဖောက်သည်)နဲ့ မတွေ့ခင်မှာ သူ့ရဲ့အကြောင်း တစ်ခုခုကို သိထားခြင်းက အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
- Fackbook ၊ Orkut ၊ Linked in ၊ twitter နဲ့ အခြားသော လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်တ် တွေကနေတဆင့် သင့်ဖောက်သည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ကို ရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒီ လူမှုကွန်ရက်ဆိုက်တ် တွေဟာ သင့်ရဲ့ အရောင်းစကား ကိုပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်အချို့ သေချာပေါက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- သုံးစွဲသူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ နဲ့ ထုတ်ကုန်ဆီကနေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အချက်တွေ ကို နားလည်ထားပါ။ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဝယ်ယူနိုင်ချေရှိ ၊ မရှိ ကို စစ်ဆေးပါ။ တစ်လဝင်ငွေ Rs 10000/-.(မြန်မာငွေ ၁၈၈,၀၀၀ ခန့်) သာ ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အဲယားကွန်းရောင်းဖို့ ကြိုးစားတာက အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ သုံးစွဲသူရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ပိုပြီးသိရှိဖို့ ကြိုးစားပါ။
၄။ ဖောက်သည်အတွက် ဖြေရှင်းနည်းတွေ သတ်မှတ်ပေးပါ။
- သုံးစွဲသူတွေအတွက် သင့်လျော်မှုရှိအရှိဆုံး ရွေးချယ်စရာကို အကြံပြုပါ။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေကို ဘယ်တော့မှ မလိမ်ရပါဘူး။ သင့်ထုတ်ကုန်က အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုသာ ပြောပြပါ။
- မဟုတ်မမှန်တဲ့ ကတိပြုမှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်ပါဘူး။ သုံးစွဲသူနဲ့ အတူထိုင်ပြီး သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်နည်းလမ်းတွေတဲ့ ကူညီပေးပါ။ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် နဲ့ ခံစားခွင့်တွေအတွက်ဘဲ အမြဲတမ်းတွေး မနေပါနဲ့။ သုံးစွဲသူရဲ့ ရှု့ထောင့်ကနေလည်း စဉ်းစားပေးပါ။ သုံးစွဲသူအတွက် မသင့်တော်ဘူးလို့ သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ အရာတစ်ခု ဝယ်ယူဖို့မတိုက်တွန်း ပါနဲ့။
၅။ ရေးသားထားတဲ့ အဆိုပြုချက်/မှတ်တမ်းမှတ်ရာ
- သုံးစွဲသူဟာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ အဆိုပြုထားတဲ့ နှုန်းထားတွေ၊ အခြားလိုအပ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ အဆိုပြုချက်တစ်ခုပေးပါ။
၆။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်
- အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်တွေမှာ ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်လို့ ရသင့်ပါတယ်။ အရမ်း တင်းကျပ်တာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါ။
- သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကအစ အားလုံးကို သိထားသင့်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေ စိတ်ကျေနပ်မှုပိုမို ရရှိစေဖို့အတွက် သူ့တို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် သဘောတူညီချက်တွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
- အရောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ဟာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို နှစ်ဖက်စလုံး လက်ခံသဘောတူပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် အရောင်းအဝယ်အတွက် ညှိနှိုင်းမှုကို အမြန်ဆုံးအပြီးသတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
၇။ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများ
- သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
- သုံးစွဲသူရဲ့ လိုအပ်ချက်(တောင်းဆိုချက်) တွေအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု ရှိ၊မရှိ သိရအောင် ပြုလုပ်ပါ။
- အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပြီးလျှင်တောင်မှ သုံးစွဲသူနဲ့ ဆက်လက်ဆက်သွယ်နေပါ။